Video edezi taa dị mfe ugbu a karịa mgbe ọ bụla ekele a plethora nke free video edezi software omume dị na internet. Free VOB video editọ bụ n'ozuzu bụghị dị ka ọkaibe dị ka ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ ọkachamara software mmemme na-zụrụ site na ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Apple ma ọ bụ Microsoft. Ma n'ihi na ọtụtụ ndị na-chọrọ naanị ịrụ ụfọdụ mfe edezi aga-eme na bulite ka YouTube ma ọ bụ na-egwu n'ihi na onwe ntụrụndụ, e nwere ọtụtụ ihe ndị magburu onwe nhọrọ ka a hụrụ online.
Freemake Video Ntụgharị
Na-atụ aro: Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Jahshaka bụ na-emeghe-isi iyi video na ọdịyo edezi na mmetụta usoro. Ọ na-arụ ọrụ dị iche iche nyiwe: Windows, Linux na Mac. E nwekwara modul maka na agba mgbazi, Keying, na nsuso, na n'usoro nke media nkwado.
Dị iche iche video formats akwado;
Na-enye ọkachamara video edezi nhọrọ.
Nwere ike ịbụ ihe siri ike n'ihi na beginners ịmụta ihe.
MPEG Streamclip bụ a free video nchịkọta akụkọ nke Mac na Windows. Ọ na-akwado dị iche iche video formats dị ka MPEG, VOB, PS, M2P, MOD, VRO, DAT, MOV na ndị ọzọ (bụghị nanị MPEG dị ka aha nwere ike na-atụ aro). Ị nwere ike bee, ewepụtụ ma sonyere gị video faịlụ site na iji nke a software. Ma ọ bụ ka IN / si ihe na tọghata n'etiti muxed na edepuchaala muxed faịlụ. E wezụga nke ahụ, ọ na-ahapụ gị tọghata videos site na otu usoro ọzọ na ibudata YouTube videos mgbe unu na-abanye peeji URLs n'ime ya.
Akwado dị iche iche video formats;
Dị iche iche video edezi ọrụ.
Nwere a glitched bọtịnụ na windo.
Nke a akpan akpan software omume ejiri ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke dị iche iche video formats. Ị nwere ike mbubata si niile ụdị isi mmalite, ike a video na ọkụ DVD mbipụta. Ọ nwere dị iche iche video edezi nhọrọ nke ka ị na ikpokọta multiple he, tinye ikwu n'ụzọ, na-aza ha n'ime a zuru ezu oru ngo.
Ọtụtụ ndị bara uru nhọrọ nyere;
Akwado iche iche video formats.
Advanced na ọ bụghị dị ka kensinammuo ịmụta ihe.
Otu nke mfe, ma sturdiest na kasị pụrụ ịdabere na free VOB edezi usoro na web, na VideoPad Video Editor bụ nke zuru okè iwebata maka video edezi maka beginners. Featuring a zuru ezu interface, abụọ wuru na-ihuenyo ka ịhụchalụ họrọ mkpachị na ikpeazụ edit, ị nwekwara ike ịgbakwunye ka oyiyi na a ide ihuenyo dị ka mma.
Ike video akakabarede ike.
Naanị enye mfe video edezi ọrụ.
Freemake Video Ntụgharị nwekwara ike ịbụ a dị mfe video edezi omume na bụ kensinammuo iji na a mma nhọrọ nke atụmatụ. Ọ enye gị ohere mfe ịdọrọ na dobe obere vidiyo, tinye mmetụta, ọhụrụ ụda na ndepụta okwu dị ka nke ọma converting gị video iche iche formats.
Ụbara mmepụta Nhọrọ.
Ụfọdụ ikpe-agaghị emeli.
Chọrọ a ọzọ ndị ọkachamara video edezi ngwá ọrụ? Wondershare Video Editor Ukwuu tụrụ aro. Ọ na-enye gị niile video edezi ngwaọrụ gụnyere mkpụbelata, gbawara n'etiti, akuku, wdg Mgbe edezi videos, ị nwere ike tọghata videos iche iche formats, bulite ka YouTube na Facebook ma ọ bụ ọkụ DVD.
Top 10 Best Free Mgbe mmetụta Plugins maka Video edezi
Top 5 Free FLV ka 3GP converters
Top 100 Free TV Gosi Sites ka iyi Free TV Kụziiri Online
Olee otú Idozi Computer freezes Up